iinyanga 1 kunyaka 5 eyadlulayo #737 by uPierre B
Ndasebenza ePether (Copter) uphuhliso lwe simulator kunye ne-3D 3.2 (isofthiwe yokufanisa i-flight). Ndifake i-version yokuqala ye-Dirk Fassbender Autopilot kwaye emva koko kuhlaziywa. Yonke into yayilungile.
Ndiyakwazi ukuqhuba zonke iimodesi ze-autopilot ngeModyuli ye-Autopilot.
Kodwa ngoku ndifuna ukuvuselela iindlela ze-Autopilot ngqo kwi-P3D. Andiyazi ukuba le modyuli isebenza njani.
Xa ndikhupha i-HC075DI_FSX_COUGAR_AUTOPILOT.zip Ndabona ukuba ngaphakathi kwakukho ifayile ebizwa ngokuthi afcp.cfg. Ngaphakathi kweli fayela kukho iikhowudi ezihlukileyo ukukhuthaza iindlela ezahlukeneyo ze-Autopilot.
Ndizamile ukulawula iimodesi ze-autopilot yi-codekeys zise-afcp.cfg ngqo kwi-P3D kodwa akukho mphumo.
Ngaba umntu unengcamango yokwenza?
iinyanga 1 kunyaka 5 eyadlulayo #748 by uPierre B
Mbi yam, ndifuna ukuvula indlela eyahlukileyo yokuzenzekelayo ngeefowuni zekhibhodi kungekhona ngeekhowudi eziphambili.